FOREX ရန်ပုံငွေများ - အခုအချိန်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ - FOREXFUNDS.COM
အာရုံစူးစိုက်မှု Forex Trading Advisors
FOREX ရန်ပုံငွေများ - အခုအချိန်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။
ယခုအချိန်သည် Forex Fund များ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်မြင့်မားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ဆက်နွယ်နေကြောင်းပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကိုဖော်ထုတ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသောသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုမရှိခဲ့ပါ။ ကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲထားသော Forex ရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်ငွေကြေးစာရင်းတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှယ်ယာနှင့်ငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်များ၌ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အခြားစျေးကွက်များနိမ့်ကျနေသောအခါစီမံခန့်ခွဲထားသော Forex ထုတ်ကုန်များသည်သိသိသာသာအထွက်နှုန်းကိုပေးနိုင်သည် မတည်ငြိမ်မှု ကာလ။ မတည်ငြိမ်မှုကအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းသိသာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် FOREX ရန်ပုံငွေများ? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောင်းဝယ်ဖို့ဘယ်လိုသိပြီ
့အဖြစ် ကောင်းစွာ - အမျိုးမျိုးအစုစုကို မတူညီသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ မဟာဗျူဟာများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်တူရိယာအမျိုးမျိုးတို့ပါဝင်သည်။
သိသာထင်ရှားသည့် Forex ရန်ပုံငွေတွင်ပါ ၀ င်သောကုန်သည်များသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်များသို့မဟုတ်အချက်ပြခြင်းများအပြင်အကောင့်မြောက်မြားစွာရှိနိုင်သည်။
Managed Forex Accounts သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ငွေဖြင့်မန်နေဂျာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ Forex အကောင့်ကိုကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောဆိုလိုသည်မှာဖြစ်နိုင်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်ခွင့်ပြုချက်ကိုကန့်သတ်ထားသောရှေ့နေ (POA) ဖြင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှရန်ပုံငွေများရုပ်သိမ်းခြင်းမတိုင်မီရန်ပုံငွေမန်နေဂျာမှကုန်သွယ်မှု (ထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အပ်ငွေများ) ကိုသာခွင့်ပြုသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကိုက်ညီမှုတပ်မက်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်သည် Forex ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာ၏မှတ်တမ်းတွင်အရေးကြီးဆုံးလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ငွေကြေးရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ၏သမိုင်းမှတ်တမ်းနှင့်သွေဖည်သည်ဆိုပါစို့။ ထိုကိစ္စတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကကုန်သည်၏ကုန်သည်၏နည်းစနစ်သည်ပြောင်းလဲသွားပြီသို့မဟုတ်အလုပ်မရှိတော့ပြီဟုစိတ်ပူကြလိမ့်မည်။ သို့မှသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းနိုင်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအဆက်မပြတ်အမြတ်အစွန်းရရှိခြင်းနှင့်အတူကြာရှည်ခံသည့်မှတ်တမ်းသည်တသမတ်တည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအနာဂတ်ရလဒ်များအတွက်အာမခံချက်မဟုတ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံရှိသော Forex ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကနားလည်ကြသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏ကုန်သည်များ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာပြီးသမိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရမည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီပြန်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သမိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သင့်သည် စုံစမ်းကြောင့်လုံ့လဝီရိယ ဖြစ်စဉ်ကို။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့် Forex စီမံခန့်ခွဲထားသောအကောင့်ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်သောခြံရန်ပုံငွေတွင်မည်သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအရည်အချင်းပြည့်မှီသောအခြားအချက်များစွာပါ ၀ င်သည်။
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော Forex အစုစုကိုတည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် Forex ရန်ပုံငွေမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်မည့် Multi-asset အစုစုကိုတည်ထောင်ခြင်းဖြင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ Managed Forex သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ၏ငွေသားပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအတွက်ကြားခံမဟုတ်သင့်ပါ။ ဒေါ်လာပမာဏမည်မျှပင်ရှိပါစေ၊ သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုလက်အောက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများမည်သည့်ရန်ပုံငွေမည်မျှပင်ရှိပါစေဤအချက်သည်မှန်ကန်သင့်သည်။ ယင်းအစားအမြတ်အစွန်း / စွန့်စားမှုအလားအလာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသော်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေရန်ခွဲဝေချထားပေးသောအစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်းကိုကိုယ်စားပြုသင့်သည်။
တစ် ဦး က FOREX ရန်ပုံငွေအကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ရန်ပုံငွေ။ နောက်တစ်ခုကဘာလဲ? ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှမည်သည့်အရာကိုမျှော်လင့်သင့်သနည်း။
စည်းမျဉ်းဥပဒေများချမှတ်ထားသောနည်းပညာဖြင့်မောင်းနှင်သည့်အွန်လိုင်း Forex ပွဲစားများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် FX ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာများနှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ပလက်ဖောင်းများနှင့်ရုံးလုပ်ငန်းများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သို့သော်ငွေကြေးရန်ပုံငွေအားလုံးကိုပွဲစားများအားလုံးတွင်မရရှိနိုင်ပါ။ ဤတွင်ယူဆချက်ဆိုင်ရာဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် - ABC Forex Fund သည်သူတို့၏ကုန်သွယ်မှုများကို Big Forex ပွဲစားမှတစ်ဆင့်သာရှင်းလင်းနိုင်သော်လည်း Best Forex ပွဲစားမှတစ်ဆင့်မဟုတ်ဘဲ၊ အကျိုးဆက်အား ABC Forex Fund တွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လိုသောဖောက်သည်သည် Fund မန်နေဂျာထံဝင်ရောက်ရန် Big Forex ပွဲစားနှင့်စာရင်းဖွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
Forex ပွဲစားကိုရွေးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုအကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးရန်ပုံငွေပေးပါလိမ့်မည်။ နောက်၊ ထုတ်ဖော်စာရွက်စာတမ်းများ ပြန်လည်သုံးသပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့လိမ့်မည်။ အကောင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် Forex Trading မန်နေဂျာအားခွင့်ပြုချက်ပေးရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကကန့်သတ်ထားသည့်ရှေ့နေ (LPOA) ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုအပ်သည်။ ယခုအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီအမြတ်နှင့်အရှုံးကြေညာချက်များနှင့်နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာများအားလုံးမှရရှိသင့်ပြီဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ပြီးနောက် Forex ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကိုလိုက်နာပါ။
အဆိုပါ ရန်ပုံငွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမိုးကုပ်စက်ဝိုင်း နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ပစ်မှတ်များပါဝင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ကန ဦး မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရန်ပုံငွေ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအခါအားလျော်စွာပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။ ဤသည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ကန ဦး မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေရှိ၊
အကယ်၍ ရန်ပုံငွေ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်၎င်း၏အမှန်တကယ်သို့မဟုတ်တွေးဆချက်ဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းနှင့်အညီလိုက်ဖက်ခြင်းမရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲမှုရှိရသည့်အကြောင်းရင်းကိုမေးမြန်းရန်ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာကိုဆက်သွယ်သင့်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကြောင်းအရင်းများသည်လက်ရှိပြန်လာမှုများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်စျေးကွက်တွင်မတည်ငြိမ်မှုတိုးပွားခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောပထဝီနိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များပါဝင်သည်။ အကယ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ Fund manager ၏ရှင်းလင်းချက်ကိုမကျေနပ်လျှင်သူ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်သူ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို Forex ရန်ပုံငွေမှလုံးဝဖယ်ထုတ်ရန်စဉ်းစားသင့်သည်။
အယူအဆဆိုင်ရာရန်ပုံငွေနှင့်စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex Accounts - Creative Funding Strategies
အယူအဆဆိုင်ရာရန်ပုံငွေက ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
မူပိုင်ခွင့်© 2021 · စကားပြေ on ကမ်ဘာဦးကမူဘောင် · WordPress · လော့ဂ်အင်
ကျနော်တို့သင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးကြောင်းသေချာစေရန် cookies များကိုအသုံးပြုပါ။ သင်ဤ site ကိုသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါလျှင်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြောင်းယူဆပါလိမ့်မယ်။Acceptကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ